Russia mulls ID fitsangatsanganana dizitaly ho an'ny sidina ao anatin'ny Vondrona eoropeanina Eurasia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Russia » Russia mulls ID fitsangatsanganana dizitaly ho an'ny sidina ao anatin'ny Vondrona eoropeanina Eurasia
Russia mull ID momba ny dia an-tariby ho an'ny sidina iraisam-pirenena ao anatin'ny Vondrona Eoropeana
Ny minisiteran'ny fitaterana rosiana dia miresaka momba ny olan'ny fitsangatsanganana nomerika EAEU miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka
Rosia dia mety hampiditra ny fizahan-tany dizitaly EAEU
Ny fampiharana finday dia ho natao manokana ho an'ny sidina iraisam-pirenena ao anatin'ny EAEU
Ny làlana fitsangatsanganana nomerika EAEU dia hanampy amin'ny fanafainganana ny fitohizan'ny dia an'habakabaka taorian'ny fianjeran'ny tsena iray taona
Raha ny filazan'ny solontenan'ny iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rosiana, ny minisiteran'ny fitaterana rosiana dia mifanakalo hevitra miaraka amin'ireo mpitatitra hevitra momba ny famoronana pasipaoro dizitaly Eurasian Union (EAEU) nomerika - fampiharana finday natao manokana ho an'ny sidina iraisam-pirenena ao anatin'ny EAEU.
Ny fampidirana ny làlana fitsangatsanganana nomerika EAEU dia hanampy amin'ny fanafainganana ny famerenana ny dia an'habakabaka taorian'ny fianjeran'ny tsena iray maharitra herintaona noho ny valanaretina COVID-19.
Mandritra izany fotoana izany, resahina ihany koa ny olan'ny fanafainganana ny fampiharana ny IATA Travel Pass nomerika, izay efa miasa amin'ny zotra an'habakabaka sasany.
“Russia dia afaka mamorona pass de pass digital momba ny dia an'habakabaka iraisampirenena ao anatin'ny EAEU. Ny minisiteran'ny Fitaterana dia miresaka momba io olana io amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Manokana indrindra, ny fandefasana rindranasa iray hafa na ny fanafainganana ny fampiasana ny IATA Travel Pass no resahina. Ny tanjona dia ny hanafainganana ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaterana an-habakabaka iraisam-pirenena arak'izay azo atao, handrisihana ny firenen-kafa hanokatra fifamoivoizana an-toerana, voafetra amin'ny ampahany na voafetra tanteraka noho ny areti-mifindra coronavirus, ”hoy ny loharanom-baovao akaiky ny resaka.
Ahoana ny fomba hanodinan'ny ICAO ny sidina mankany amin'ny mahazatra vaovao